ကောင်းမြတ် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ကောင်းမြတ်
Category Archives: ကောင်းမြတ်
ကောင်းဆက် – အတ္တ
၁။ အမှိုက် ၂။ အတ္တ ၃။ အပြောမကြီးနဲ့ ၄။ မီး ၅။ ချင်းခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့ ၆။ နားထောင်လိုက် ၇။ အပြစ်ရှိလား ၈။ တမ်တိုက်နတ်သမီး ၉။ သက်သက်ဒုက္ခပေးတာပဲ ၁၀။ အမြင့်ဆုံးမှာ
February 13, 2010 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ကောင်းမြတ် ကောင်းဆက် New Myanmar Albums5Comments
မိန်းမ ( red card )
၀၁။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုမလုပ်နဲ့ – ချမ့်ခိုင် ၀၂။ ငါကိုစွန့်သွားတော့ – R ဇာနည် ၀၃။ ချစ်ခွင့်ပြန်ပေးပါ – စိုင်းစိုင်း + အိပိုင် ၀၄။ နောက်ဆုံးထိ – ဟန်ထွန်း ၀၅။ အနာဂတ်ခရီးရှည် – ချမ့်ခိုင် ၀၆။ အတိတ်ကအိပ်မက် – R ဇာနည် ၀၇။ မိန်းမ – ချစ်ခိုင် ၀၈။ သီချင်းသစ်များ – စိုင်းစိုင်း + ပိုးရည် ၀၉။ နတ်သမီးသို့….. – M သီဟ ၁၀။ မင်းအတွက်ဆို – ကောင်းမြတ်
February 8, 2009 ME *MMA* အိပိုင် အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စိုင်းစိုင်း ကောင်းမြတ် ချမ့်ခိုင် M သီဟ Myanmar Artist Rဇာနည် 15 Comments
SZ Ft. Lil Kaung Myat – အဆိပ်နတ်သမီး
November 1, 2008 ME *MMA* ကောင်းမြတ် Myanmar Artist SZ Unreleased Albums3Comments
ကောင်းမြတ် – မျောလွင့်နေတဲ့တိမ်
၁။ Intro ၂။ What You Want…? မင်းဘာအလိုရှိလဲ….? (feat .. စိုင်းစိုင်း) ၃။ စကားလေးတစ်ခွန်း ၄။ မင်းအတွက်ဆို ၅။ လွင့် ၆။ မင်းကြောင့် ၇။ Girl Friend – သူငယ်ချင်းချစ်သူမိန်းကလေး ၈။ မျောလွင့်နေတဲ့ တိမ် ၉။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိရင် (feat – မျိုးကျော့မြိုင်) ၁၀။ ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ ၁၁။ သက်တံ့ပုံပြင်
January 17, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ကောင်းမြတ်4Comments